Kedu ihe kpatara ebili mmiri na-eme | Netwọk Mgbasa Ozi
Gịnị kpatara ebili mmiri ji eme?
Egwu ikuku na-atụ ụjọ bụ ihe a na-ahụkarị n'oge ọnwa ọkọchị. N'ime afọ ndị gara aga, Ọnọdụ Spain na-arịwanye elu na-enwe okpomọkụ nke na-agabiga ihe mgbochi nkwụsị nke ogo 40 na-eme ka ụbọchị ndị a na-apụghị ịnagide na-agwụ agwụ. Ma ọ dịtụwo mgbe ị na-eche ihe kpatara ụdị ikpo ọkụ dị otú a?
Abọchị ole na ole, Spain na-ata ahụhụ ihe a maara nke ọma dị ka okpomoku. Okpomoku di nfe kariri ogo 40 maka ubochi 3 ma obu karie, nke n’eme ka aru ghara idi gburugburu ị pụghị ịpụ n'okporo ámá ruo ọchịchịrị. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-amụ gbasara ihu igwe na-ekwu na nke a bụ n'ihi ikuku na-ekpo ọkụ nke na-esi n'Africa na-asọba na peninshula.
Ndị ọkachamara a na-eche na ebili mmiri na-arịwanye elu karịa oge yana oke okpomọkụ karịa afọ ole na ole gara aga. Eziokwu a bụ n'ihi oke nsogbu mgbanwe ihu igwe na-ebute na mbara ụwa niile kwa ụbọchị. Ugbu a na dịka data a pụrụ ịtụkwasị obi si dị, na Spain enwere oke okpomọkụ kwa afọ 5 ọ bụla, ebe ọkara narị afọ gara aga ọ bụ ihe na-adịghị mma na ọ na-eme kwa afọ iri abụọ.
Mmetụta dị egwu na ọnọdụ okpomọkụ, agbaze na mpaghara Arctic niile na-ata ahụhụ yana ọganihu nke mgbanwe ihu igwe Ihe ndị a bụ ihe ndị dị egwu na-eme ka ebili mmiri na-arịwanye elu na ogologo oge na mpaghara ụwa dịka Spain. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka ndị mmadụ mara nke ọma ka ha wee mara na mgbanwe ihu igwe bụ ihe dị oke njọ ma na ọ nwere ike ibute nnukwu nsogbu na mbara ụwa, dị ka ikpo ọkụ ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Gịnị kpatara ebili mmiri ji eme?
Osimiri Gulf ga-ebelata okpomoku zuru ụwa ọnụ na Europe